मोटरसाइकल सर्भिसिङमा के के गरिन्छ, थाहा छ ? | Hakahaki
मोटरसाइकल सर्भिसिङमा के के गरिन्छ, थाहा छ ?
मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु :
नारायण पाण्डे/काठमाडौं । मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्नुपरे तपाई हामी सबैले वर्कसपलाई जिम्मा दिन्छौँ । तर, धेरैलाई सर्भिसिङमा के के गरिन्छ ? भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको हुनसक्छ ।
सर्भिसिङ भइसकेपछि पार्टपूर्जा सफा भए नभएको वा आवश्यक सेवा मिले नमिलेको बारे पनि कमैले चासो लेलान् । मनकामना मोटरसाइकल वर्कसप, झम्सिखेलका मेकानिक दिनेश थापाका अनुसार धेरैले मोटरसाइकल सर्भिसिङ गर्न छाडिदिन्छन् र भनेको समयमा आएर लैजान्छन् ।
उनी थप्छन् ‘धेरैलाई सर्भिसिङमा के के गरिन्छ भन्ने विषय थाहा छैन र उनीहरु चासो लिन पनि चाहँदैनन्।’ सर्भिसिङ गर्न आउँदा कसैले गुनासो लिएर आए पनि ती गुनासा पुरा भएपछि भने अन्य कुरामा चासो नलिने गरेको उनको भनाइ छ ।
मानिसको शरीर जस्तै मोटरसाइकललाई पनि समय समयमा जाँच्नु पर्ने र पार्टपूर्जा सफा गर्नुपर्ने थापा बताउँछन् । तर कतिपयले त समयमै सर्भिसिङ नगर्ने र ठूलो समस्या आइसकेपछि मात्रै ल्याउने गरेको उनले बताए ।
खर्च हुने लोभले समयमै मोटरसाइकल सर्भिसिङ नगर्नेहरु पनि प्रशस्तै भएको उनी बताउँछन् । ‘आखिर राम्रैसँग चलेकै छ, जुन दिन समस्या आउँछ अनि सर्भिसिङ गरौँला भन्नेहरु पनि धेरै छन्, तर यसले चालकलाई नै बेफाइदा हुन्छ’ उनले भने ।
समयमै सर्भिसिङ नगर्दा बिग्रन, एक्कासी दुर्घटना हुनसक्छ
थापाका अनुसार समयमै सर्भिसिङ नगर्दा मोटरसाइकल बिग्रने, एउटा समस्याले थप समस्या निम्त्याउने, एक्कासी दुर्घटना हुनसक्ने जोखिम हुन्छ । मोटरसाइकल समय समयमा सर्भिसिङ गरेमा टिकाउपन क्षमता र माइलेज बढ्ने उनले बताए । नयाँ किन्दा पनि कम्पनीहरुले निश्चित अवधि वा गतिको मापनपछि सर्भिसिङ गर्न सुझाव दिने गर्दछन् ।
समयमै सर्भिसिङ गराउने मात्रै नभई सर्भिसिङपछि मोटरसाइकललाई आफूले पनि परीक्षण गर्नुपर्नेमा मेकानिकहरु जोड दिन्छन् । लामो समयदेखि मोटरसाइकल मर्मत तथा सर्भिसिङमा संलग्न रहेका थापा चालकधनीले पनि केही आधारभूत पार्टपूर्जा र तिनको संरक्षणका सम्वन्धमा ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउँछन् ।
‘चालकलाई कम्तीमा आधारभूत पार्टपूर्जाबारे सामान्य जानकारी हुनैपर्छ, यसो भन्दैमा आफैले मर्मत गर्न सक्नुपर्छ भन्ने पनि होइन’ उनले भने ‘तर सर्भिसिङ पुरा भयो वा भएन वा सर्भिसिङका नाममा आफू ठगियो कि भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि !’
सर्भिसिङ गर्दा सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा मोबिल हो । मोबिल कम भयो भने इन्जिनमा धेरै असर पर्ने मेकानिक थापा बताउँछन् । ‘साधारणतया मोटरसाइकल १ हजार देखि १ हजार २ सय किलोमिटर गुडेपछि मोबिल फेर्नुपर्छ तर मान्छेहरुले २ हजार किलोमिटर नपुगी फेर्दैनन्, यो निकै ठूलो समस्या हो’ उनले भने ।
लामो समयसम्म मोबिल नफेर्दा इन्जिनमा समस्या आउने र इन्जिनमा आएको समस्याले जोखिम बढ्ने उनले बताए ।
‘जसरी हामीले समयमै उपयुक्त खाना खान्छौँ र तन्दुरुस्त हुन्छौँ, त्यसैगरी समयमै मोबिल फेरेर इन्जिनलाई सुरक्षित गर्नैपर्छ’ उनले भने ।
कार्बोरेटरले इन्जिनलाई जरुरत अनुसार हावा र इन्धन पुर्याउने काम गर्दछ। हावा र इन्धनलाई समूचित रुपमा मिश्रित गर्ने डिभाइस नै कार्बोरेटर हो ।
मोटरसाइकल कुद्नका लागि यसले इन्जिनलाई शक्ति प्रदान गर्दछ। उच्च गतिमा कुदाउँदा कार्बोरेटर बढी मात्रामा सक्रिय रहन्छ । कहिलेकाँही खासगरी चिसोमा मोटरसाइकल राम्ररी स्टार्ट हुन नसकेको अवस्थामा हामी कार्बोरेटरमाथि जोडिएको ‘चोक’ तानेर स्टार्ट गर्छौँ ।
एयर फिल्टरले धुलो इन्जिनमा पस्नबाट रोक्ने हुनाले सर्भिसिङ गर्दा यसमा पनि ध्यान दिनु जरुरी रहेको थापाले बताए। एयर फिल्टर सफा नहुने हो भने धुलो इन्जिनमा गई असर पर्ने र अन्य प्राविधिक समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौं धुलाम्मे छ, यहाँ चल्ने मोटरसाइकलहरुले समयमै सर्भिसिङ नगर्ने हो भने इन्जिनमा एयर फिल्टरकै कारण समस्या आउँछ’ थापाले भने ।
ब्रेक माटरसाइकलको अत्यन्तै जटिल पुर्जा हो। यसमा चालकले निकै ध्यान दिनु जरुरी छ । समस्या नआएपनि प्रत्येक पटक सर्भिसिङ गर्दा ब्रेकमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै डिक्स ब्रेकवाला मोटरसाइकल छ भने ब्रेकआयल पनि चेक गर्नु जरुरी छ । यसो गर्दा ब्रेक नलाग्ने समस्या आउँदैन । ब्रेक साह्रो वा कँसिलो हुँदैन अन्यथा चलाउँदा हात/खुट्टा दुख्ने समस्या पनि आउनसक्छ ।
फ्युल पाइप अर्थात फ्युल लाइन पनि सर्भिसिङका क्रममा चेक गरिन्छ । फ्यूल लाइनमा अवरोध आएमा इन्धन चुहिने, इन्धन सर्कुलरमा अवरोध आई, स्टार्ट नहुने वा बीचबीचमा बन्द हुने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछ । यदी फ्यूल पाइप जाम भएको वा प्वाल परेको भए नयाँ नै फेर्नुपर्छ । यसलाई टालेर काम चलाउन नमिल्ने थापाले बताए ।
यी बाहेक टायरको एयर प्रेसर पनि चेक गरिरहनुपर्दछ । आफू हिँड्ने दुरीलाई मध्यनजर गर्दै टायर प्रेसर सन्तुलनमा राख्नुपर्ने थापा बताउँछन् ।
यदी ब्याट्रीमा चार्ज पूर्ण मात्रामा सकियो भने ब्याट्री नै काम नलाग्ने हुनसक्छ । त्यतिबेला नयाँ ब्याट्री राख्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । तसर्थ ब्याट्रीमा चार्जको मात्रा पनि थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ। ट्याङ्की, लाईट, चेन, हर्न आदी पनि चेक गरिरहनु पर्छ ।
त्यस्तै मोटरसाइकलाई समयसमयमा धोइरहनु पर्दछ । साबुन वा अन्य लिक्वीडभन्दा पनि ‘बाइक स्याम्पु’ले धुँदा उपयुक्त हुने थापा सुझाउँछन् । स्याम्पुलाई पानीमा घोल्ने र सफा कटनको कपडा घुलित पानीमा भिजाएर मोटरसाइकल धुनुपर्दछ ।
तर ट्याङ्की वा पाइपलाइन चुहिएको अवस्थामा, सिट च्यातिएको वा अन्य समस्या रहेको खण्डमा भने पहिले समस्या समाधान गरेर मात्रै धुनुपर्ने मेकानिकहरु सुझाउँछन् ।
धोएको मोटरसाइकल राम्ररी सुकेपछि मात्रै ‘ल्युब’ हालेर संचालन प्रक्रियालाई सहज बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै यदि कतै स्क्र्याच भएको अवस्थामा उचित कलर स्प्रे गर्न पनि सकिन्छ ।